मेसीलाई बार्सिलोनाभन्दा तेब्बर बढी पारिश्रमिकको प्रस्ताव ! - Everest Dainik - News from Nepal
मेसीलाई बार्सिलोनाभन्दा तेब्बर बढी पारिश्रमिकको प्रस्ताव !
एजेन्सी। लियोनल मेसीलाई क्लब भित्र्याउन इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीले निकै ठूलो प्रयास गरेको खुलेको छ ।म्यानचेस्टर सिटीले मेस्सीलाई बार्सिलोनामा पाइरहेको भन्दा तेब्बर बढी पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरेको स्पेनिस पत्रिका मुण्डो डिप्रोटिभोलाई उद्धृत गर्दै द सनले लेखेको छ ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकपमा उत्कृष्ट गोल गर्नेमा मेसी र रोनाल्डो नाम मनोनयन !
म्यानचेस्टर सिटीले पारिश्रमिक तेब्बर बढाएर दिने प्रस्ताव गरे पनि लियोनल मेस्सीले अस्वीकार गरेको खबरमा उल्लेख छ । मेस्सीलाई क्लब भित्र्याउने प्रयासमा प्रशिक्षक पेप गार्डिवला नै सक्रिय भएको क्लबका प्रमुख कार्यकारी खाल्दून अअल मुबारकले खुलाएका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस अब मेसी र रोनाल्डोको प्रतिस्पर्धा सकियो !
गार्डिवलाले मेस्सीसँग सीधै कुरा गरेको खबरमा उल्लेख छ । प्रस्ताव टेबुल गरे पनि मेस्सीले अस्वीकार गरेको उनले बताए । ३१ वर्षका मेस्सी बार्सिलोनाबाट आफ्नो खेल जीवन अन्त्य गर्ने पक्षमा रहेको देखिएका छन् ।
ट्याग्स: Barsilona, Footballar Messi